Boosaaso: Madaxweynaha Puntland oo kormeeray qaxootiga kasoo cararay Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Boosaaso: Madaxweynaha Puntland oo kormeeray qaxootiga kasoo cararay Yemen
A warsame 23 May 2015 23 May 2015
Mareeg.com: Madaxweynaha maamulka Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’ ayaa booqasho ku tagay Xerada ay dagan yihiin Qaxootiga kasoo qaxay dalka Yaman ee ku sugan Bosaaso, wuxuuna indhaindheeyay qaybaha ay ka kooban tahay Xeradaasi.
Dr. Cabdiweli Maxamed Cali ayaa Warbixino ka dhagaystay Guddiga Gurmadka dadka soo qaxay Yaman,Maamulka Xerada iyo Qaxootiga ku jira Xerada oo isugu jira Soomaaliya,Yamaniyiin,Itoobiyaan,Kenyaati iyo Jabuutiyaan.
Waqtiga Madaxweynuhu uu booqanayay Xerada ayaa waxaa ku sugnaa Qunsulka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya, Asmalaash iyo Safiirka Yaman u fadhiya Soomaaliya Mr. Mansur Ali Rayash Al-imrani, xilli dad u dhashay dalalka Itoobiya iyo Yaman ay qayb ka yihiin dadka soo qaxay ee ku jira Xerada.
Qunsulka Itoobiya u fadhiya Soomaaliya Asmalaash ayaa Puntland iyo dadweynaheeda uga mahadceliyay soo dhoweynta loo sameeyay dadka kaso qaxay Yaman ee ku jira Xerada,wuxuuna sheegay in Puntland ay gacan ka siinayaan sidii loo caawin lahaa Qaxootiga u dhashay dalka Itoobiya.
Safiirka Yaman u fadhiya Soomaaliya Mr. Mansur Ali Rayash Al-imrani oo ka mid ahaa Mas’uuliyiinta la la hadlay Saxaafadda ayaa sheegay in Dawlada iyo dadweynaha Puntland ay abaal lama illaawana u galeen Qaxootiga u dhashay Yaman,wuxuuna Bogaadiyay soo dhoweynta iyo taageerada ay Puntland siinayso Qaxootiga uga imanaya Yaman.
Madaxweynaha Puntland, Cabdiweli Maxamed Cali ‘’Gaas’’ ayaa sheegay in Soomaalidu markii ay ka qaxeen dalka ay u qaxeen dalal ay ka mid yihiin Itoobiya iyo Yaman oo si wayn uso dhoweeyay, sidaa darteedna ay Puntland ay diyaar u tahay iney abaalkaas gudo.
Dekedda Boosaaso ayaa waxaa dhowr jeer kusoo xirtay doonyo sida dad qaxooti Soomaali ah oo kasoo cararay colaadda dalka Yemen, iyadoo maamulka Puntland u diyaariyey xero ay kusii sugnaadaan waqti kooban inta ay uga gudbayaan halka ay ku socdaan.
Baydhabo: Koox hubeysan oo dilay Malaaq caan ah
Puntland oo xirtay labo saxafi oo ka shaqeynayey Radio Daljir, Garowe